Mpivarotra sivana mahery miharo volo sy miharo | kejia
Ny fahombiazan'ny filtration an'ny onjam-peo avo lenta mifangaro izay azo soloina ny sivana mahomby avo lenta dia misy ny boaty tsindry H13 sy 14 static ary sivana mahomby tsy misy diaphragm. Ny mombamomba ny aliminioma dia ampiasaina ho boaty faneriterena tsy miova, ary ilay boaty dia misy sivana avo lenta tsy misy diaphragm. Izy io dia manana tombony amin'ny rivotra mahery, endrika tsara tarehy, fametrahana sy fanoloana mety, fikojakojana tsotra, tsy fampiasam-bola firy, lanja maivana ary hateviny manify. Indraindray, rehefa voafetra amin'ny haavon'ny tranobe ny rihana ambony amin'ny efitrano madio na takiana ny famolavolana paikady dia azo fidina ny sivana avo lenta azo ampifandraisina.
Fitaovana sivana famaritana ara-materialy: h13-h14 fantsom-panasiana fantsom-baravarankely mahomby: h13-h14, H13: 9997-9999% @ 0.3um, h1499995-99999% @ 0.3um (MPP) boaty sivana: boaty alim-bolo vita amin'ny alim-bolo 150 mm fonosana takelaka fonosana: lovia aluminium na lovia galvanisialy ankehitriny: fitaovana fametahana fantsom-panafody hafa: anatiny nopetahana tamin'ny 15mm matevina PEF insulated landihazo miditra anaty rivotra savaivony: ankapobeny q250 mm na q300 mm haben'ny sivana: arakaraka ny tena takian'ny mpanjifa , hatevin'ny alàlan'ny aliminioma: 150 mm.
Ny fepetra fandidiana sy ny mason-tsivana fanoherana ny rivotra amin'ny sivana avo lenta azo ampiasaina dia be mpampiasa amin'ny efitrano fandidiana hopitaly, laboratoara, efitrano fitsaboana, microelectronics, fitaovana filma sy fibre optique ary fikarakarana sakafo ary tontolo iasana miasa miaraka amin'ny fepetra fahadiovana avo lenta. Izy io dia misy ny sivana postnatal faharoa, izay mampiasa profil aluminium ho boaty faneriterena tsy miova. Ny sivana nariana dia manana rivotra mahery, endrika tsara tarehy ary fametrahana tsara kokoa. Ny fahamendrehan'ny zana-kazo ambonin'ny 0.3 dia mihoatra ny 9.99. Ny boaty dia vita amin'ny takelaka vy vita amin'ny vy na vy tsy misy fangarony, miaraka amina sosona insolofof tsy misy afo eo ivelany sy sivana mahomby be soloina tsy misy fisarahana fisarahana ao anatiny. Ny sivana dia vita amin'ny taratasy mangarahara vita amin'ny fibre vera tena tsara, miaraka amin'ny fanoherana voalohany ambany, rivotra lehibe, toerana kely misy olona ary firafitra mifototra, vidin'ny famatsiam-bola ambany, fametrahana mora sy fikojakojana, ny firafitry ny mpanao fanatanjahan-tena: nofon-kena, ary ezaho sorohina ny fofon'ny fidirana sy ny fivoahana, ary ny 2, ny habeany, ny mavesatra ao anatiny. Ny boaty vita amin'ny alimika vita amin'ny alimika dia namboarina ho mora fikirakirana sy fametrahana. 3. Ny savaivon'ny tuyere dia 250, 300m ary 350. Ny fepetra fandidiana ny sivana avo lenta azo ampidirina sy ny fifandraisana misy eo amin'ny fikorianan'ny rivotra sy ny fanoherana. 2. Ny fametrahana ny sivana miharo fampidirana avo lenta dia mila atao aorian'ny fametrahana ny fantson-drivotra. Ny fitsapana fitsapana ao anaty dia tokony ho tanterahina, ary ny fametrahana dia tokony hatao aorian'ny fikorianan'ny rivotra sy ny fahadiovana mifanaraka amin'ny fepetra takiana, Mba hanitarana ny androm-piainan'ny fahombiazan'ny fitaovana avo lenta. 3. Mba hahazoana antoka ny ain'ny serivisy amin'ny fitaovana haingam-pandeha mihoatra ny hafainganam-pandeha, tolo-kevitra ny handalovan'ny rivotra amin'ny alàlan'ny pre pass tsy latsaky ny F8 (colorimetric 90% 95%) alohan'ny hidirany.
Teo aloha: Mpamafa lamba
Manaraka: Cartridge sivana fanadiovan-drivotra
Carte sivana Pp